Tangi Rori Zvikamu, Tangi Trailer Zvikamu, Fuel Chiteshi Zvikamu - Jiasheng
isu tinopa mhando yepamusoro.
ona zvimwe zvakawanda>
Oiri Tanker Swing Tarisa Valve
Emergency Pazasi Valve
Tanker Manhole Kavha
Jiangsu Jiasheng Petroleum Tech Co., Ltd.iri muna Xuzhou, Jiangsu dunhu, ine nyore kutakura mune njanji, mugwagwa uye kubhururuka. Yedu kambani inyanzvi inogadzira inosanganisa dhizaini, kugadzira uye kutengesa mune yakazara organic. Kambani yedu inogadzira uye inotengesa zvikamu zvakasiyana zvematangi, zvikamu zvemafuta, kudiridza ngoro zvikamu, aruminiyamu uye simbi isina simbi nekukurumidza coupling, maviri-nzira uye treble-nzira mavharuvhu, epakati uye akadzvinyirira petrochemical mavharuvhu, eEuropean standard gasi kupora matangi matangi ..
Tanker subsea mavharuvhu anonziwo pneumatic mavharuvhu, pneumatic subsea mavharuvhu, emergency mavhavha, uye echimbichimbi kuvhara-kure mavharuvhu. Sezvo paive nezviitiko zvakati wandei zvekumhanya-mhanya nemumugwagwa nenjodzi dzemotokari dzinotakura zvinhu muChina mu2014, madhipatimendi akakodzera ehurumende akasimbisa supervis ...
Chii chandinofanira kutarisisa kana rori rerangi richipfungaira?
1. Pamberi pekushanda kwechikepe, iyo anti-yekufashukira probe inoda kubviswa. Mushure mekushanda kwechikepe kwapera uye tangi ratonhodzwa, rinodzorerwa kubva kugungano nyowani. 2. Pamberi pebasa rechikepe, fusible plug pazasi pevhavha yepasi pemvura inoda kubviswa. Mushure me ...
Chii chinonzi Stainless simbi? Mukunzwisisa kwevanhu vazhinji, "simbi isina chinhu" isimbi isingaregi ngura, asi vatengi vazhinji vanogadzira mavara engura kana mavara ebrown brown (mavara) achionekwa pamusoro pemavharuvhu esimbi. Ndechipi chikonzero? Stainless simbi mavharuvhu vane abilit ...
Chii chandinofanira kuita kana iyo yekuzvivhara-wega yekuwedzera pfuti isingakwanise kuzvisimbisa?
Kunyangwe iyo pfuti yemafuta mumotokari yemafuta inogona kuzvisimbisa inoenderana zvakanyanya nekuti iyo yekuchengetera kamuri inogona kuumba yakakwana vacuum. Naizvozvo, kana pfuti yekuwedzera mafuta isingakwanise kuzvisimbisa, inofanirwa kugadziriswa zvinoenderana nemazano anotevera: 1. Tarisa kana chisimbiso chiri pakabatana pakati peba ...